We Fight We Win. -- " More than Media ": ထောင်မှလွတ်မြောက်လာသူများစာရင်း
၁၉ ဒေါက်တာ မင်းထွန်း
၃၆ ဦးဘမြင့် ဒေါ်မာမာဦး
၃၉ ကရင် စောနေထူး
၄၀စစ်ထောက်လှမ်းရေး ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း စိုးညွန့်
၇၂ ဒေါက်တာ တင်မင်းထွဋ်
၈၅ ဒေါ် ၀င်းမြမြ
၈၆ မတင်တင်မြ၈၇ ဦါ်ဘမြင့်
၉၄ ကိုမြတ်ကို (GW)
I really tanks to U Thein Sein. But there still need to do alot, don't stop.
GOOD NEWS!!! I AM VERY HAPPY.
DON'T EVER HAPPENED LIKE THIS AGAIN.
TOO MUCH FOR EVERY BODY.
ပြည်တွင်းကလူတွေက ပြောနေကြတယ်။ ကိုမိုးသီး နိုင်ငံခြားကနေ လွတ်မလာသေးလို့တဲ့။ အဲဒါ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကို ဖိအားများ များပေးရမယ်တဲ့။ ကိုမိုးသီး နိုင်ငံခြားကနေ ပြန်လွတ်လာတဲ့နေ့ မှ အားလုံး လွတ်မြောက်ပြီလို့ပြောနိုင်မှာတဲ့။
Ko Moe Thee will not come back unless U Thein Sein promise him to feed same as international communities without letting do anything except shouting and demonstrating.
13 January 2012 at 02:13